Iimpawu ezingalunganga ezibalaseleyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Nangona zihlala zingaqhelekanga, xa zibonakala zihlala zithatha ingqalelo yombukeli imizuzwana emininzi ngelixa zinika intsingiselo kwaye zixabise ubukrelekrele obabuchazayo. Kude kube kutshanje bendisebenzisa ukuqokelela Iimpawu ezingalunganga kuba zibonakala kum ziyimizekelo ecacileyo yokungaqondakali kunye nengqondo elungileyo yokunambitha enokuyilwa ngumyili wemizobo. Njengoko usazi, olona phawu luphambili kwezi logo kukuba ayisiyiyo le nto zibonakala ngathi xa uzijonga kuqala, kodwa phantsi komngxuma ongenanto, ongenanto kunye "ongabonakaliyo" bafihla inqaku, phantse njengonobumba ophela unika umfuziselo ubunzima kwilizwi. Kukugqitywa okugqibeleleyo phantse kwalo naluphi uphawu lwentengiso kuba kukhuthaza ulutsha, ubuqhetseba kwaye ngamanye amaxesha kuyonwabisa.
Andazi ukuba ukhe wazama ukuyila iilogo zolu hlobo, kodwa abo bazamile baya kwazi kuqala ukuba zinokuba nzima ukuphuhlisa kuba umsebenzi uphindwe kabini. Ayisiyiyo kuphela into yokuba kufuneka sifumane uyilo lweengcinga olufanela amaxabiso, i-aesthetics yenkampani kunye negama lophawu, kodwa kufuneka sisebenze ngemilinganiselo emibini, sikhathalela indawo esingayisebenzisiyo umzuzwana Ukuyifunda kutyhila intsingiselo yomsebenzi wethu. Apha ndikushiya ngokukhetha okuhle kwe 28 iilogo ezilula kakhulu kodwa loo nto kum ngokobuqu ibonakale intle kwaye balunge kakhulu ukuyivala le veki iphelileyo kaFebruwari benencasa entle emlonyeni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Iimpawu ezigqwesileyo ezingalunganga